कोभिड खोप खरिद प्रक्रियाका लागि पहल « Mechipost.com
प्रकाशित मिति: २२ कार्तिक २०७७, शनिबार ०९:०३
फिदिम । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को खोप खरिद प्रक्रियाका लागि पहल थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् लगायत सरकारका सरोकारवाला निकायको संयुक्त पहलमा कोभिड खोप खरिद प्रक्रिया थालेको हो ।
परीक्षणमा सफल भएर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)को मान्यता पाएका जुनसुकै खोप छिट्टै नेपाल भित्र्याउन सरकार सक्रिय रहेको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीले कोभिड भ्याक्सिनको नेपालमा क्लिनिकल परीक्षण र खरिदका दुवै प्रक्रियामा नेपाल सरकार अघि बढेको छ भन्नुभयो ।
अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको परीक्षण अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेका छन् । “कुनै पनि मुलुकको परीक्षण झ्याप्प सफल भइहाल्यो भने त खोप किन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले पनि सरकारले पहल थालेको हो,” ज्ञवालीले थप्नुभयो ।
उहाँले खोप खरिदको प्रक्रियासँगै क्लिनिकल परीक्षण पनि नेपालमा गर्नका लागि सँगसँगै पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । डा. ज्ञवालीले खोप परीक्षण र खोप भित्र्याउन कार्यक्रम भने छुट्टाछुट्टै विषय हुन् भन्नुभयो ।
खोप परीक्षणको विषय भनेको फरक रहेको भन्दै उहाँले परीक्षण भएकै खोप नेपालमा परिचालन हुन्छ भन्ने नरहेको बताउनुभयो । यो चिकित्सा विज्ञानको एक प्रकारको नियमित गतिविधि भएकाले नेपालमा खोपको क्लिनिकल परीक्षण हुँदैमा डराउनुपर्ने विषय नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
तर नेपालमा पनि क्लिनिकल परीक्षण भएको खोप नै विश्वमा सफल भएको खण्डमा त्यो नेपाल भिœयाउन सहज हुने उहाँको भनाइ छ । तथापि त्यो खोप नेपालमा नभित्रिएको अवस्थामा पनि क्लिनिकल परीक्षण भने जारी रहने विश्वास सम्बन्धित मुलुकका कम्पनी र सरकारलाई दिलाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
परिषद्का अनुसार चीनको कम्पनी होङ्सी कम्पनीले उत्पादन गर्न लागेको खोपको क्लिनिकल परीक्षण नेपालमा हुने विषयमा पनि थप छलफल भइरहेको छ । (यो समाचार आजको गोरखापत्रमा चाँदनी हमालले लेखेकी छन् ।)